VaMugabe Vokonzera Mutauro Pahurongwa hweEuropean Union-Africa Summit
Gumiguru 12, 2007
Apo nyika dzemuEurope nedze muAfrica, dziri mushishi kugadzirira musangano we European Union-Africa summit, uyo wakatarisirwa kuitwa muna Zvita, mutungamiri weBritain, VaGordon Brown, varamba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kumusangano uyu kana VaMugabe vakakokwa.
Asi VaMugabe vakatoti vari kuenda kumusangano uyu, uye vari kuwana rutsigiro kubva kune vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica, nedzimwe dzemuEurope, kusanganisira Germany nePortugal.
Nyaya iyi, yatemesa musoro vatungamiri venyika dzemuEurope nedze muAfrica. VaBrown vari kumira nerekuti havaoni zvakakodzera kuti VaMugabe vange vari pamusangano uyu, sezvo vaine hutongi hwakaipa, uye vari kutyora kodzero dzevanhu vemuZimbabwe.
Muna 2003 musangano uyu wakazotadza kuitwa,sezvo vaimbove mutungamiri weBritain, VaTony Blair, vakaramba kuendako, vachinyunyuta zvakare nemaitiro aVaMugabe.
Vanoongorora zviri kuitika munyika vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kunyika dzemuEurope, sezvo dziri kuda, kudyidzana nenyika dzemuAfrica, nekudzipa rubatsiro. Izvi zvinotevera kwavanoti kutorwa kwemisika nenyika dzakataita seChina, iyo yave kutengeserana nenyika dzemuAfrica.
Portugal inoti ichakoka vatungamiri venyika dzose dzemuAfrica, kunyange hazvo mutungamiri weBritain vari kupokana nenyaya yekukokawo VaMugabe.
Mutori wenhau weStudio 7, Carole Gombakomba aita hurukuro na National Cordinator ve Crisis in Zimbabwe Coalition, Va Jacob Mafume, pamwe nasachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Va Noel Kututwa, kuti tinzwe pfungwa dzavo pagakava riripo iri.
Dzimwe Nhau Kubva ku Studio 7...